Maraykanka Oo Lacag Uu Afghanistan Ka Xayiray Ku Bixinaya Dacwadahada Dadkii Ku Waxyeeloobay 9/11 – Bulsho News
Maraykanka Oo Lacag Uu Afghanistan Ka Xayiray Ku Bixinaya Dacwadahada...
Maraykanka Oo Lacag Uu Afghanistan Ka Xayiray Ku Bixinaya Dacwadahada Dadkii Ku Waxyeeloobay 9/11
Xukuumadda Maraykanka ayaa qorshaynaysa in ay ku bixiso lacag dhan 7 bilyan oo doolar oo Afghanistan kaga xayiran dalkeeda mag dhaw la siinayo dadkii ku waxyeeloobay weerarradii 9/11 iyo in inta kale gargaar looga dhigo dalkaas.
Washington ayaa lacagtaa xayirtay markii Daalibaan talada dalkaas la wareegtay sannadkii hore laakiin laakiin waxa cadaadis ka saarraa sidii ay u heli lahayd xal lagu isticmaali karo lacagtaas iyada oo aan loo gacan gelinayn mitidiinta.
Af-hayeen u hadlay Daalibaan ayaa cambaareeyey tallaabadaas waxaanu ku tilmaamay “tuugo” iyo wax caddayn u ah “akhlaaq xumo”.
Talaabadan ayaa ku dhaqan galaysa amar madaxweyne oo arinta ka dhigaya xaalad degdeg ah.
Lacagtaa xayirnayd ayaa amarkaa Madaxweyne Biden si rasmi ah xayiraadii uga qaadayaa waxaanu farayaa hay’adaha maaliyadeed ee Maraykanka in lacagtaa lagu shubo akoon laga furo bankiga dhexe ee dalkaas ah.
Lacagtaas oo laba bilayan oo doolar oo ka mid ah lagu hayo Yurub iyo Imaaraadka iyo meelo kaleba ayaa ah mid ahayd qaadhaan deeq caalamiya ahayd oo loo ururiyey labaatankii sano ee la soo dhaafay.
Jimcihii ayaa sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Maraykanku sheegay in sanduuq gaara oo cid gaar ahi maamulayso lagu shubi doono 3.5 bilyan oo doolar si loogu bixiyo hawlaha gargaarka ee deg dega ay ugu baahan yihiin dadka Afghanistan iyada oo isla markaana “laga hortagayo in faa’iidadu toos u gaadho Daalibaan”.
“Weli go’aano gaar ah maanu gaadhin oo ku saabsan sida lacagtaa loo isticmaali doono” ayuu yidhi sarkaalkaasi, waxaanu intaa ku daray in ay dhawr bilood qaadan doonto inta ay lacagtaasi gaadhi doonto dadkaa loogu talo galay maadaama oo go’aan maxkamadeed la sugayo.
Lacagta inteeda kale ayuu sheegay sarkaalkaasi in ay Marykanka oolli doonto oo lagu bixin doono kharashka kaga baxay maxkamadaha ay dacwadaha ka wadaan dadkii Marakanka ahaa ee ku waxyeeloobay argagixisada.
Sannadkii 2010, ayaa qiyaastii 150 qoys oo dadkooda lagu dilay 9/11 waxay dacwado ku soo oogeen dhawr urur oo ay ku jiraan Daalibaan iyo Al-Qaacida oo ay ku eedaynayaan in ay door fududayn ah iyo qorshayn ba ku lahaayeen weerarkaas.
In kasta oo dadkaa qaarkood durba ku doodayaan in ay xaq u leeyihiin lacagtaas, ayaa hadana waxa ka horraysa in maxkamadi go’aan ka gaadho doodooda ah in la siiyo lacagtaas iyo in kale, sida uu Aqalka Cadi sheegay.
“dadka Maraykanka ah ee dacwoonayaa waxay fursad buuxda ka heli doonaan maxkamadaha Maraykanka” ayuu syidh sarkaalku, waxaanu intaa raaciyey in “arintani tahay tallaabadii koobaad ee arintaas isla markaasna aan lacag dadkaa la siinayn ilaa maxkamadi u xukunto”.
Mohammed Naeem, oo ah af-hayeenka xafiiska siyaasadda Daalibaan ee Qatar ayaa Jimcihii qoraal uu Twitter-ku ku baahiyey ku sheegay in qabsashada lacagtaa uu leeyahay bankiga dhexe ee Afghanistan tahay “tuugo” oo ay “astaan u tahay heerka ugu hooseeya ee akhlaaq xumada aadamaha”.
Daalibaan waxay hore uga digtay in hadii lacagtaas loo soo celin waayo ay taasi keeni karto “dhibaatooyin” ay ka mid yihiin in dadku dalka ka suudalaan iyo dhaqaalaha oo duma.
Dhaqaalaha Afghanistan hoos buu u sii hoobanayey tan iyo intii Daalibaanku talada qabsadeen, waxaanay Qaramada Midoobay ka dardaar werisay in dalkaasi qarka u saaran yahay “saboolnimadii ugu ba’nayd dunida” oo ah 97% marka la gaadho badhtamaha sannadka 2022.